बुवाको ज्यान गयो बिदेशमा ,आमा अर्को सित, बिचल्लीमा हामि भएपानी खुशी हुनु है आमा ! मन थामेर पढ्नुहोला
काठमाडौं-‘राम्रो सँग पढनु है’ फोनमा भनेका यो आवाज बाहेक बुवाका बारेमा केही याद छैन रामेछापको रामपुरकी सन्जु तामाङलाई । सानैमा विदेश गएका बुवाको अनुहार पनि सम्झनामा छैन ।आकाशमा उडिरहेको हवाइजहाज आँखाले भ्याउन्जेल हेर्नुहुन्छ ।...
सरकारले टुङ्गो लगायो सात ओटै प्रदेश का राजधानी , कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ ? सुची सहित
ठमाडौँ । सरकारले सातओटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएको छ । निर्वाचनपछि प्रदेशको कामलाई अप्ठ्यारो नहोस भनेर सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी राजधानी तोक्ने छ । २२ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट त्यसको निर्णय हुनेछ । प्रदेशको...
ताप्लेजुङ जिल्लाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा सोमबार रातिदेखि हिमपात सुरु जनजीवन प्रभावित
१२ मंसिर, ताप्लेजुङ । जिल्लाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा सोमबार रातिदेखि हिमपात सुरु भएको छ । सामान्य वर्षासँगै हिमाली क्षेत्रमा हिमपात सुरु भएको हो । हिमपातका कारण जिल्लाका ओलाङ्चुङगोला, याङ्मा, घुन्सा, लेलेप, ग्याब्ला, तोक्पेगोला र फलेलगायतका...
काठमाडौ., १ मंसिर । सिचाईमन्त्री संन्जय कुमार गौतमले आफु मन्त्री भएको १०० दिनको प्रगति र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन । मन्त्री गौतमले छोटो समयमै बर्दियामा विकासको खोलो बगाएका छन । बर्दियाले सिचाइमा निकै फड्को मारेको...
सांसदहरुलाई दिईयो बादरको सङ्गघ्या वैठक बिना कारण टुङ्गियो
काठमाडौँ: व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले प्रयोग गरेको शब्दप्रति दुईपटक आपत्ति प्रकट गरिएको छ। नेकपा (एमाले)का सांसद ममता गिरीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको बचाउ गर्दै बाँदर प्रवृत्तिका मानिसले मात्रै यो प्रस्तावलाई...
काभ्रेको धुलिखेलमा टिपरले मोटरसाइकललाइ ठक्कर दिदा मोटरसाइकल चालक गम्भीर घाईते टिपर चालक फरार
सुरज श्रेष्ठ काभ्रे -२८ काभ्रेको धुलिखेल नजिकै बा २ ख ५७११ टिपरले बा ७० प २१६० को १५० सिसि को पल्सर बाइक लाई अरनिको होटेल नजिक ठक्कर दिएको छ ।पशुपति गौतमले चलाइरहेको बाईकलाइ एक्कासी टिपरले ठकर...
रामेछापको मनकामना नगरपालिकाको १२ शिक्रालमा १० घर पहिरोको उच्च जोखिममा
रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर १२ शिक्रालका १० घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । बस्ती छेउको पाखो र बारीमा जमिन फाटेर बग्न थालेपछि ति घरहरु जोखिममा परेका हुन् । बर्ष सुरु भएसंगै...
काभ्रेको बनेपामा एकै परिवारको ४ जना घरको चुकुल लगाइरहेको अबस्थामा मृत्यु फेला थप जानकारी आउँन बाँकी
रबि धिताल -काभ्रे सम्बाददाता काभ्रे, ६ साउन । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं . ७ बसपार्कमा होटल सञ्चान गरेर बसेका एकै परिवारका ४ जना मृत फेला परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख...
नेपालगन्ज : बाँकेको बनकट्टी गाविस-६, सूर्यलालपुर्वा र बाबुपुर्वाका अधिकांश बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ। कुपोषणका कारण बालबालिकामा उमेर अनुसारको तौल, उचाई नबढ्नुका साथै बौद्धिक विकास समेत छिटो नहुने समस्या रहेको तिवारीपुर्वाका स्थानीय एवम् पूर्वगाविस...
रामारोसन गाउँपालिकामा एमालेलाई उछिन्दै , माओबादि केन्द्रका भास्कर साउद बिजयि
अछाम जिल्ला रामारोसन गाउपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रमुख पदमा माओवादी उम्मेदवार झकर साउद”भास्कर’उपाध्यक्षमा स्वरोस्वती रावल “प्रतिभा”निर्वाचित हुनुभएका छन। विजयी भास्कर साउद्ले ३४ सय २ मत अन्तरले एमाले उम्मेदवार चक्र रावललाई...
दरबार हत्याकाण्ड पछि अर्बपति बनेका बिनोद चौधरीको यो प्रयास फेरी असफल
काठमाडाैं। कम्युनिष्टहरूको मात्रै सरकार नबनोस् भनेर जतिसुकै प्रपञ्च रचेपनि अन्ततः ‘चाउचाउ चौधरी’ अर्थात विनोद
हाम्रो अबको सरकार ज्योतिषलाई हात हेराउन पुजा गर्न र रिबान काट्न हैन,जनताको सपना पुरा गर्न हो :ज्ञावाली
काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले बुधवारै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
अहिले रातिबाट ओली र प्रचण्ड बने पार्टी अध्यक्ष,प्रचण्डले खोले रहस्य
रत्ननगर, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ पार्टीको अध्यक्षता केपी
म एक बर्ष भित्र काठमाण्डौलाइ फोहोर मुक्त सहर बनाईन भने जनताले जे सजाय दिए पनि भोग्न तयार छु :लालबाबु पण्डित
काठमाडौँ । वायु प्रदूषण र यसबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न
मध्यरातमा पुर्व प्रधानमन्त्री देउवामाथि कांग्रेसकै ४ शक्तिसाली नेताबाट आक्रमण !
प्रधानमन्त्रीवाट निवर्तमान भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा घरमा नै आराम गरेर बसेका छन्